Kubulawe usomatekisi emngcwabeni | Ilanga News
Home Izindaba Kubulawe usomatekisi emngcwabeni
Kubulawe usomatekisi emngcwabeni
ADLIWA yingebhe amalungu omphakathi waseLamontville emuva kokudutshulwa kubulawe ngentululwane yezinhla-mvu usomatekisi esemngcwabeni womngani wakhe ngoMgqibelo emi-ni, eqeda kwethula inkulumo ekhulumela abangani.
UMnu Fithwell “Mafithi” Masondo, obengusomatekisi kwiLamontville Taxi Association, ubulawa nje ubesephuma ehholo eya emotweni yakhe njengoba bekunenkonzo yo-mngcwabo womngani wakhe, uMnu Sipho Ndebele naye obengusomatekisi, oshone ngokugula.
Ukubulawa kukaMnu Masondo kwethuse abaningi abebekulo mngcwabo njengoba kuthiwa kwe-nzeke kubuka inqwaba yabantu ebisemngcwabeni.
Kuthiwa bekungathi kuqoshwa ifilimu ngendlela ebesiduma ngayo isibhamu, abantu sebelele phansi besaba izinhlamvu. ILANGA lithole ukuthi uMnu Ndebele ushona nje, isimo kasisihle kulo soseshini kodwa lokho yinto ekhulunyelwa phansi, kuvele kubonakale ngoba seku-nesidumbu phansi ukuthi kukhona okungahambi kahle.
Kuthiwa uMnu Masondo ubese-nesikhathi enyamalele ngakho ukuthi kukhona ukungezwani kubanikazi bamatekisi ahambela eLamo-ntville. Kusolwa ukuthi ababulali bebevele bazi ukuthi uzobakhona emngcwabeni kaMnu Masondo njengoba bebesondelene kakhulu.
Ngokuthola kweLANGA, kuqhamuke amadoda angaziwa ehamba ngeBMW, ama aqondana nemoto yakhe. Kuthiwa uzamile ukubaleka kodwa kwasho ukuthi kukhona amanye abesemgadile, adedela inhlamvu ebhekise kuyena washo-nela endaweni yesigameko.
ILANGA lithole ukuthi kunama-nye amalungu omphakathi abehambele umngcwabo adubulekile alimala ngesikhathi abasolwa bedubula uMnu Masondo. Kuthiwa sebengaphezu kuka-5 osomatekisi asebedutshulwe babulawa kulo soseshini selokhu kuqale lo nyaka.
Izinxushunxushu kubikwa ukuthi ziqale ukugqama kakhulu ngemuva kokudutshulwa kubulawe uMnu Sibusiso “Boy” Shazi waKwaNdengezi, obenamatekisi ahambela eLamontville, naye obengusomate-kisi obesatshwa kule mboni.
Ethintwa yiLANGA uMnu Lwazi Banda ongusihlalo walo soseshini, ucele ukuba lixhumane noMnu Mandla Mnyandu, okuthe uma
eshayelwa wazihlangula, wacela ukungaphawuli ngalolu daba, wathi usoseshini usazohlangana ukhiphe isitatimende ngokwenzekile.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuvulwe amacala amabili elokubulala nelokuzama ukubulala. amaphoyisa asenza uphenyo. Bekungakaboshwa muntu.
Previous articleUkuthanda abantu kumfake kwipolitiki
Next articleUbuhle buhambisana nokunakekela imvelo